2 0 1 7. Ịhụnanya, ikpe ziri ezi na OKWUKWE. 2 0 1 8 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Na 2017 mmalite nke afọ, Achọrọ mbụ tupu tackling a dị mkpa n’isiokwu na apocalyptic ugboro anyị na-enwe ugbu a ka unu niile, ndị m hụrụ ụmụnna ndị nọ Christ na hụrụ n’anya blog na-agụ akwụkwọ, m chọrọ Ezi afọ Ọhụrụ 2017.
A Onye ọ bụla, M anya na Chineke na-eme n’ebe ọnwụnwa na enyemaka karịsịa na ịgafe nke afọ a, 2017.
Ana m ekpe ekpere Chineke na-enye gị ike iji na-eche ihu ihe isi ike nke ndụ na-a afọ ole na ole ọzọ na ndị ọzọ dị mkpa.
Ka Chineke nye gị na-ị na-ahụ ike. Ya-enye gị ghara uche dị mkpa na-enye gị ma na-egosipụta ya nkwado na ịhụnanya mgbe nile.
Ka ị na-anọ n’ime ndụ nke akwụkwọ ka ha wee ghara ibutere onwe ha ọnụma nke Chineke na-arịdata nwayọọ nwayọọ na ụwa ruo ọtụtụ afọ.
Ịhụnanya, Iwu na Okwukwe
Rịba ama na isiokwu a Love, Iwu na Faith complements isiokwu:
2017 ise na-ebute ụzọ
Anyị nnọọ aghaghi imata na Love, Iwu na Okwukwe bụ atọ dị mkpa nozioma nke ndi Christian ụzọ ndụ na ike na ihu nke Chineke iji zọpụta anyị ma ọ bụ ịma anyị ikpe ebighị ebi.
Iji ghọta ihe nke na o yiri bara uru iji mee ka a obere na-echetara banyere oge anyị bi.
Ebe ọ bụ na 14 May 1948, ka m ugbua kwuru ọtụtụ ugboro na gosipụtara na blog, anyị wee banye Biblical oge na njedebe nke oge.
A na Bible oge na njedebe nke oge na-ewe ebe n’elu otu ọgbọ.
Anyị nwere nkwenye n’Oziọma (karịsịa Matthew 24 njikọ: End of Days ), nke kwukwara na Jizọs Kraịst ga-alọghachi azụ n’anụ Earth tupu ọgwụgwụ nke ikpeazụ emana ibu eze e on ndi mmadu maka puku afọ.The Chiefs .
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, oge nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ bụ-aga n’ihu na-ata ahụhụ, dị ka ihe mgbu nke ịmụ nwa.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 3
N’ihi na ị ma onwe gị na ụbọchị Jehova ga-abịa dị ka onye ohi si abịa n’abalị. 3 Mgbe ha asị, Udo na ntụkwasịobi dị, Mgbe ahụ na mberede ka nbibi n’elu ha, dị ka mgbu abịakwasị nwanyị dị ime, na ha agaghị agbanarịkwa. 4 Ma unu, ụmụnna anyị, anọghị n’ọchịchịrị, ka ụbọchị ahụ we jide ụnụ dị ka onye ohi ; …
Ọgwụgwụ oge mgbu wee sie ike na-aga n’ihu dị ka anyị pụrụ ịhụ kwa ụbọchị.
News , (Wars, asịrị agha, Mbugharị, iyi ọha egwu na jihad bụ akụkọ niile media) ihe mgbu nke ndi mmadu , (mbibi, anọghị ná nchebe, ịda ogbenye, ọdachi, ọrịa, ime ihe ike na ọnwụ nke ụkpụrụ na- eke ize ndụ ná ndụ) nke ihe mgbu nke ụmụ anụmanụ (Dead unexplained ndị ọtụtụ nde kwa afọ gburugburu ụwa ebe ọ bụ na 2008 ka azu, nnụnụ ọhịa ndị ọzọ na anụ ụlọ) A dịghị ahụ, n’ụkọ nke nkọwa, usoro mgbasa ozi akụkọ Minima na ihe mgbu nke Earth (oké ebili mmiri, oké mmiri ozuzo, Earth quakes, oké ifufe, idei mmiri, ọkụ ọgbụgba na ifufe aghọ ndị ọzọ na unconventional) na-anabata ọtụtụ ndị dị ịrịba ama ọdachi ma kpamkpam nkịtị.
The set nke ndị a niile ihe mgbu ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịhụ ụfọdụ nkọwa iche iche, o na-etolite a dum na ihe joro na ya kwuru okwu ya na Bible dị ka otu n’ime ndị mkpọsa nke e dere n’oge na-adịghị na-abịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Na ókè a niile mgbu egosi nke ọma na oge nke nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dị ezigbo nso.
Ọ bụ ezie na nghọta anyị nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ ekwe ka anyị gosi na ọgbọ a agaghị agabiga n’ihu Jesus Christ afiak ahụ ka Earth ya puku afọ ọbubu-eze nke-agwụ puku afọ mgbe e mesịrị site ikpe ikpeazụ. (The ikpe ikpeazụ ga-abụ njedebe nke mmadụ efu. Ụfọdụ ga-ebighi ebi n’okpuru iwu Chineke na ndị nke ọzọ ruo mgbe ebighị ebi n’okpuru iwu nke lucifa).
N’agbanyeghị na anyị na-ahụ na ihe mgbu ghọrọ ike na-aga n’ihu.
Ọ dịghị onye pụrụ ikwu kpọmkwem mgbe a ga-ibia na ebube nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Anyị maara na na Bible ọgbọ oge na-webatara ka a oge nke 40 afọ, ma ka afọ 70 na ọbụna 80 afọ na kwa afọ 120 kacha afọ nke ndụ na Jenesis 6: 3
N’ezie n’agbanyeghị ihe isi ike nke ndụ na ruo n’ókè nke ihe mgbu, Chineke pụrụ ime ka anyị echere ruo mgbe 2068 (1948 + 120 afọ) nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Jizọs Kraịst kwuru ihe dị oké mkpa, » Abụ m Alfa na Omega, ndị mbụ na ndị ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ » Okwu nka na-ekwu ugboro atọ otu ihe dị iche iche na-ekpughe a bu eziokwu nke a ukwuu, na pụrụ iche mkpa.
Nke a ahiriokwu bụ nnọọ uru ọbụna oké mkpa na Nchikota na n’Isi nke 24 Matthew ịghọta ihe oge ga nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Na isi 24 nke Matthew Jesus na-akọwa ihe mere mgbe mbụ ọgbọ onye amụ nwa bụ amalite of Christianity (ọ bụ nke mbụ) na ihe ga-eme nke ikpeazụ emana tupu nloghachi ya. (Ọ ga-adịkwa ikpeazụ). Nke a pụtara na on o siri amara bụ zuru ezu, ya mere na ọ dịghị onye ga-azọpụta site na ya hụrụ na N’ihi na a ga-azọpụta, ọ ga na-aga site Act.
Na nke a isi 24 nke Matthew, Jizọs buru amụma na mbibi nke ụlọ nsọ Jeruselem. Na n’afọ iri asaa wee ebe a mbibi nke ụlọ nsọ ahụ Jizọs buru n’amụma Christ.
Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịghọta na mgbe Jizọs na-ekwu nke ọgbọ a na amaokwu nke 34 nke isi 24 nke Oziọma Matiu
34 Ana m agwa unu eziokwu, ọgbọ a agaghị agabiga, na ihe nile nke a mere.
Nke a bụ a ọgbọ nke 70 ya mere ebe ọ maara na ihe àmà mbụ nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ bụ May 14, 1948, nloghachi nke Jesus Christ kwesịrị dịghị mgbe e mesịrị ka May 13, 2018.
N’ezie a simplistic ụzọ anyị pụrụ ikwu na nke a nloghachi na ebube nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst maka 2018 eleghị anya n’ihi na Ista party on 2 April 2018.
Ọ dịghị ekwe omume na ọbụna puru omume, ma n’ebe dị anya n’ebe ụfọdụ n’ihi n’ọdịnihu bụ nke Chineke naanị ya.
Dị ka onye ọ bụla nwere ike ịhụ site na blog m mgbe nile kwụsị ụfọdụ oge na ka ihe a ga metụtara Bible amụma akpọsa nloghachi nke Onyenwe anyị.
Ọ bụ ezie na mgbe m na ezubere iche abụghị ndị nke ya laghachiri ebube, ha otú ọ na-esi ike mgbe ụfọdụ n’ihi na anyị Church na n’ihi Okwukwe. Ichi na 2015 na nkwupụta nke Pope François ọgwụgwụ September na si Patrick Katidral ke USA. Ebe o kwuru na n’okpuru a égbè eluigwe nke kụrụ aka na crucifixion Jizọs Kraịst bụ mmadụ ọdịda. Njikọ .
Nzube nke a blog abụghị ikpughe nloghachi ụbọchị nke Onyenwe anyị na King Jesus Christ ma na-aghọta na nke a nloghachi bụ ụfọdụ. Ọ bụ anyị na ọgbọ. Na ọ bụ emeriri anya nke ịdị ukwuu nke ihe ịrịba ama na nke mmezu nke amụma Bible zubere maka njedebe nke oge.
M naanị a na-ekwusa na-ọkwa na nloghachi nke Onyenwe anyị na obi m na mkpụrụ obi.
My mgbaru ọsọ bụ na-ere akwụkwọ ọ bụ ezie na m dere akwụkwọ abụọ banyere Chineke na ndi mmadu. (Nke mbụ: The Nkwusa ejila nke King, nke abụọ France, Civilization na Republic nwayọọ )
My mgbaru ọsọ bụ na onye ọ bụla nwere ike ịkwadebe maka nloghachi nke Jesus Christ na-azọpụta ma nọgide na ịdenyere aha ha n’akwụkwọ nke ndụ na-eru mgbe ebighị ebi ya na Chineke na-adịghị na lucifa.
Ọ bụrụ na m ọtụtụ ndị chere nke nloghachi nke Jesus Christ n’ihi na Ista April 2, 2018 na-egosi ịbụ na ụbọchị nke Chineke họpụtara si kee uwa maka nloghachi nke Jizọs Kraịst chịa ihe a kpọrọ mmadụ n’otu puku afọ na anyị iche iche doomsday. Ya mere, anyị nwere 15 ọnwa na-eche.
Nke a pụtara na ndị a iri na ise ọnwa ga-abụ ihe kasị mkpa ọnwa nke ndụ.
Mgbe ihe ndị a iri na ise ọnwa anyị ga-azọpụta ma ọ bụ ikpe.
Ndi ga-azọpụta site na ỊHỤNANYA
Ebe ọ bụ na ọpụpụ Jesus Christ e nwere puku afọ abụọ, anyị bụ ndị dị na steeti amara.
Nke a pụtara na ndị na-baptizim, ndị nabatara Jesus Christ dika Onye nzoputa, chegharịrị ná mmehie ha mere, na-arịọ mgbaghara mmehie site na Chineke site n’ekpere na maintiennes na nke ime mmụọ njikọ na onye okike.
Ọ bụrụ na ha anọgide na-adị umeala ndụ ma na-elekọta inyere ndị na-achọ enyemaka ha.
Ya mere, ee! Ha bụ ndị Kraịst, ha bụ akụkụ nke Chọọchị Jesus Christ na-ekwe nkwa na-azọpụta site na ịhụnanya ya. Lee m isiokwu ọzọ ụfọdụ:Dare Okwukwe na Chineke na Jizọs Kraịst
Ha bi Earth n’ime Narị Afọ Iri.
Ndi ga-azọpụta site Iwu
Ọtụtụ ịhụ ụsụụ nwere ndị na-ebi ndụ a ọkọlọtọ ndụ, n’achọghị iji merụọ ndị ọzọ, ma, nanị bi na amaghi nke ịhụnanya Jizọs Kraịst ga-azọpụta n’ihi na ụfọdụ (otu puku afọ mgbe e mesịrị) site na Act nke Chineke na ikpe ikpeazụ na niile ndị nwụrụ anwụ ga-ebilite n’ọnwụ na-ekpe ikpe site na Chineke dị ka ọrụ ha.
Ndị na-azọpụta site na okwukwe
Ụfọdụ Ndị Kraịst Zọpụtara site Ịhụnanya Jizọs Kraịst na a mụrụ ọzọ!Ntụgharị bụ onye jụrụ Chineke-eduzi ndụ ha, na-ha n’ebe ọjọọ na ọnwụnwa.
Nkà na ndụ na ịhụnanya Jizọs Kraịst na ngụkọta na zuru tụkwasịrị Chineke obi, na a n’aka, elu na mpako isi ha bụ Ndị Kraịst akpan akpan na njedebe nke oge.
All ndị Kraịst bụ ndị chebe ụka na-enweghị ihe ike, mgbe ụfọdụ, risking ndụ ha iji gwa ya n’oge na-adịghị nke ọchịchị Ịhụnanya on Earth na nloghachi nke Jesus Christ.
All ndị Kraịst bụ ndị na-enye ndụ ha na-Jesus Christ site n’inyere ndị nọ ná mkpa, ndị ọrịa, ndị nọ ná mkpa na ndị na-n’ụzọ ime mmụọ akpafu.
All ndị Kraịst ndị na-azọpụta site na ịhụnanya Jizọs Kraịst na ndị àmà ga-agọzi nke Chineke na Jizọs Kraịst.
N’oge ndị a iri na ise ọnwa lucifa ga-anụ na iti ndi mmadu ike ya dum.
Ị ghọtara na ọnwụnwa ga-esi ike na nnukwu na ọ ga-esi nnọọ ike mgbe nile ịga n’ihu n’ụzọ ndụ na okwukwe serenely.
Ị ga-aghọta na lucifa bu eze efu nakwa na anyị ga-mgbe nyochaa ihe na omume agaghị ahapụ anyị daba.
Ọ dị mma na-aghọta na-abụghị nke ịhụnanya ọ bụghị mgbe niile asị ma mgbe ụfọdụ n’anya onwe ya!
-Abụghị nke Act bụghị mgbe niile nupụrụ, ma mgbe ụfọdụ iwu ahụ n’onwe ya.
-Abụghị nke okwukwe bụghị mgbe niile ekweghị na Chineke ma okwukwe onwe ya.
Ya mere, anyị pụrụ n’ụzọ dị mfe ahapụ anyị ghọgbuo ma ọ bụrụ na anyị elezighị anya.
-Aghọta na Chineke na e nweghị ịhụnanya na-enweghị iwu, dị ka e nweghị iwu na-enweghị ịhụnanya .
Ma lucifa e nweghị ịhụnanya na-eme na e nweghị iwu na Ịhụnanya .
M òkù ka ị tụgharịa uche na a isi iche nke Ịhụnanya na iwu Chineke na lucifa.
Mgbe Okwukwe ihe nwere ike ọ ejere gị na-eche echiche ma ọ bụrụ na ị na-efe Chineke na-eje ozi lucifa!
Na Ịhụnanya Chineke na e nwere ndị notions nke Mgbaghara, ọmịiko, ịdị umeala n’obi na-ekere òkè.
Iwu Chineke e echiche nke nghọta, otu na-rụzie.
Na Ịhụnanya lucifa-enweghị iwu e nwere echiche nke ndụ ịla n’iyi dị na agụụ mmekọahụ.
Na iwu na-enweghị Ịhụnanya lucifa gara aga echiche nke ọchịchị aka ike na ohu.
Na okwukwe e nwere ihe edeturu nke Chineke, ịnụ ọkụ n’obi, ịhụnanya na nkwanye ùgwù maka iwu.
Mgbe okwukwe na-etinye na ọrụ ahụ nke Chineke , mgbe ahụ, ọ dị ọcha obi ụtọ na-enwe ike ijere Chineke ozi site n’inyere ụmụnna anyị na ịgbachitere chọọchị anyị na okwukwe anyị.
Ma mgbe na okwukwe na-etinye na ọrụ ahụ nke lucifa ya agbanwe ndị na-jide ya na ozugbo mmadụ maa jijiji,-eyi ọha egwu, jihadists na ndị ọzọ na ihe ọjọ si puta.
Na n’ụzọ na Chineke dị warara dị ka àgìgá na a ụzọ na-aga naanị site na Jizọs Kraịst.
« Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ; ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma e wezụga site n’aka m! «
Okwu ndị a Jizọs Kraịst bụ oké akwa ya pụta maka okpukpe nile nke ụwa.
Ọ dịghị onye ga-azọpụta ma ọ bụrụ na nke a abụghị ịhụnanya Jizọs Kraịst na n’ihi na nke a anyị ga-ama ekweta na-aghọ Christian site na baptizim ime mmiri.
Anyị nwere iri na ise n’ọnwa ndị na-echere nlaghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na Ista April 2, 2018.
Ma ọ bụghị naanị Chineke kpebie na ụbọchị nke a nloghachi ga-abụ ikekwe mgbe e mesịrị na ikekwe ọbụna tupu mgbe ahụ.
Agbanyeghị a nloghachi bụ ụfọdụ na-eru nso na anyị mkpa idozi.
Iji kwadebe, anyị ga-eme bụ ịgba mbọ ịga n’ihu ná ndụ site na ike nke Mmụọ, ọ bụghị site na adịghị ike nke ahu.
-Arịọ n’ekpere ka Chineke nyere anyị aka n’ụzọ ọ bụla oge nke ndụ anyị ma na-eduzi ndụ anyị na nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Rịọ Chineke n’ekpere ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị, dị ọcha mkpụrụ obi anyị.
Anyị ga-ama na 2017 kwa n’oke nkpagbu na Ụwa, nke a bụ ihe e ji n’aka ebe ọ bụ na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ nke ihe mgbu na-tụnyere na Bible ka ihe mgbu nke ịmụ nwa, n’ihi ya kwa afọ nke ọgwụgwụ oge dị njọ karịa ikpeazụ.
The hourglass nke njedebe nke oge Chineke e site May 14, 1948, ndị ikpeazụ oge gafeworonụ ọka ga-ahụ nloghachi nke Jesus Christ.
Ekpe ekpere kwa ụbọchị na Chineke adịghị egbu oge a nloghachi n’ihi na mwute anyị na ndị anyị na-ata ahụhụ ebigh’ebi na-eto eto na mwute ikwu na Kama nke ahụ, ha ga-anọgide na na ọbụna ikowa!
Na-bụ ire ọkụ nke okwukwe unu nke ọma udo ma jupụta mmanụ na obi gị, na mkpụrụ obi gị ịgafe ọchịchịrị nke 2017.
Ọ bụrụ na, dị ka m kwenyesiri ike na nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ga-eme na 2018 (njedebe nke ọgbọ nke 70 afọ), mgbe afọ 2017 ga-bụghị naanị njọ karịa 2016, ma ọ ga-abụ egwu n’ihi na ọ ga-aka oge ụbọchị nke iwe Chineke.
Isiokwu a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na hypothetically ezikwa ndị laghachiri Earth nke Jehova nke ndị nwenụ, Eze nke Ndị Eze, Jizọs Kraịst, bụ nanị nwa nwoke nke Chineke, m ga-sụgharịa ya n’asụsụ nile na m na-agba m hụrụ n’anya Ụmụnna ụwa na-ekwurịta okwu ya niile kọntaktị gị mere na ndị niile nwere ihe ọmụma na-akwadebe mkpụrụ obi ya.
Hụrụ n’anya ụmụnna ndị nọ Christ Jesus ị nwekwara ndị àmà nke Jizọs Kraịst na-agbachitere okwukwe na anyị Church.
Ekpe ekpere maka nzoputa nke mkpụrụ obi anyị, n’ihi na ihe niile anyị na ụmụnna ya na ndị niile okwu nke Oziọma adịghị metụrụ.
Ka Chineke gọzie gị ma na-eduzi ndụ gị.